Kutheni Zetar - Zetar Industry Co., Ltd.
Plastic Inaliti zomngundo
Plastic extrusion zomngundo
Abicah Inaliti Ukubumbela
Dog Izinyo Brush
Wamkelekile kwi Shanghai Zetar
Alibaba Site Yethu
Yasekwa ngonyaka ka-2005, kwaye zisekelwe kanye apha e Shanghai China.At 2017, siya uvuzwa i "China Quality High Supplier" Ibhaso yi Alibaba kakuhle eyaziwa njenge njengenkokeli okukhawulezileyo-jika, zexabiso eliphantsi China isitofu iplastiki ambumbe, inaliti zeplastiki tooling kunye neenkonzo prototyping ngokukhawuleza.
2016 Zetar wafudukela ivenkile 50,000-mbombo-unyawo leyo macala 35km ukusuka Shanghai kwizibuko kunye Pudong Airport. Ngoku Zetar uye iinjineli abaphezulu 6, bonke kwiminyaka engaphezu kwama-10 amava kushishino ziphene yokubumba zeplastiki. Nesiqingatha kubo nako ukuthetha IsiNgesi.
Iminyaka eli-13, siye sakhonza olukhawulezayo-ithuba ziphene zeplastiki baza plastic isitofu ngumngundo iimfuno zeenkampani ezinkulu nezincinane - ukusuka uThamsanqa 100 ukuya ezintsha start-ups.We've isicelo ubuchule bethu kuluhlu olubanzi lwamashishini, kuquka izixhobo zonyango, izithuthi, ezempilo, elektroniki, izinto ukupakisha, izinto zokwakha, indlu, izinto zokudlala, izixhobo edlalwa ngaphandle nangaphezulu. Akukho into ukuntsonkotha loyilo yakho okanye ubungakanani oda yakho
Inaliti nokubunjwa weplastiki, Inaliti Ukubumbela Tool, Parts emigodini nokubunjwa, Injection Molding, Overmolding Inaliti Ukubumbela, Indawo zeplastiki,